ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်တက်ရောက်ခွင့်ကို ဘရာဇီးလ်နဲ့ ဂျာမနီ ရယူနိုင်မလား
27 Jun 2018 . 3:57 PM
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားအုပ်စု(E)နဲ့ (F)ရဲ့ နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေကို ဒီနေ့(ဗုဒ္ဓဟူး)မှာ ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမှာပါ။ နာမည်ကြီးအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ ဂျာမနီ၊ ဘရာဇီးလ်အသင်းတို့ နောက်တစ်ဆင့်တက်ရောက်ခွင့်ကို ရယူနိုင်မလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေတယ်။ (၄)မှတ်ရထားတဲ့ ဘရာဇီးလ်အသင်းဟာ ဆားဘီးယားနဲ့ ကစားရမှာဖြစ်လို့ သတိထားကစားရမှာဖြစ်ပြီး ဂျာမနီအသင်းကတော့ အာရှက တောင်ကိုရီးယားနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တာကြောင့် နိုင်ပွဲရယူဖို့ အခြေအနေကောင်းပါတယ်။ ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်တက်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်ရှိနေသေးတဲ့ ဆွီဒင်၊ ဆွစ်ဇာလန်အသင်းတို့လည်း အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲမှာ ရလဒ်ကောင်းဖို့ ရုန်းကန်ကြမှာပါ။
တောင်ကိုရီးယား နှင့် ဂျာမနီ (၂၇-၆-၂၀၁၈ ည ၈း၃၀)
တောင်ကိုရီးယားအသင်းက နှစ်ပွဲစလုံး ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး အုပ်စုက ထွက်ခဲ့ရပါပြီ။ ရုန်းကန်နေရတဲ့ ဂျာမနီအသင်းကတော့ ဆွီဒင်ကို အနိုင်ရခဲ့တာကြောင့် နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ အခြေအနေကောင်းတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ တစ်ဖက်ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ ဆွီဒင်-မက္ကဆီကိုပွဲမှာ ဘယ်လိုရလဒ်ထွက်သည်ဖြစ်စေ တောင်ကိုရီးယားကို ဂိုးများများနဲ့နိုင်မယ်ဆိုရင် ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်ကို သေချာပေါက်တက်ပါပြီ။ ဂျာမနီပဲ ဂိုးပြတ်အနိုင်ယူသွားမှာပါ။
မက္ကဆီကို နှင့် ဆွီဒင် (၂၇-၆-၂၀၁၈ ည ၈း၃၀)
(၆)မှတ်ရထားပေမယ့် မက္ကဆီကို ဒီပွဲမှာ ပေါ့ဆလို့တော့ မရပါဘူး။ တကယ်လို့ ဂျာမနီသာ ဂိုးပြတ်နိုင်ပြီး မက္ကဆီကိုက ဆွီဒင်ကို (၂)ဂိုးပြတ်ရှုံးမယ်ဆိုရင် ဂိုးကွာခြားချက်အရ ဆွီဒင် နောက်တစ်ဆင့်တက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ မက္ကဆီကိုရဲ့ခြေစွမ်းအရလည်း ဆွီဒင်ကို ဂိုးပြတ်ရှုံးဖို့ဆိုတာ သိပ်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ မက္ကဆီကို သရေနဲ့အနိုင်ပါပဲ။
ဆားဘီးယား နှင့် ဘရာဇီးလ် (၂၈-၆-၂၀၁၈ နံနက် ၁၂း၃၀)
ဒီပွဲက တကယ့်ကို အကြိတ်အနယ်ရှိလာမယ့်ပွဲပါ။ (၃)မှတ်ရထားတဲ့ ဆားဘီးယားနဲ့ (၄)မှတ်ရထားတဲ့ ဘရာဇီးလ်တို့အတွက် အုပ်စုကတက်ရေး အဆုံးအဖြတ်ပါပဲ။ ဆားဘီးယားအသင်းဟာ ဆွစ်ဇာလန်ကို မထင်မှတ်ဘဲ ရှုံးခဲ့တဲ့အတွက် နစ်နာခဲ့တယ်။ ဆားဘီးယားရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ ကစားသမားစုဖွဲ့မှုက အားရစရာကောင်းတယ်။ နာမည်ကြီးဘရာဇီးလ်အသင်းကတော့ ဆွစ်ဇာလန်၊ ကော်စတာရီကာတို့နဲ့ကစားခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲစလုံး ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီး အခုထိ ဘရာဇီးလ်အစစ်အမှန်ကို မတွေ့ရသေးဘူးလို့ ဆိုရမယ်။ နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ ဖောင်ဖျက်ကစားမယ့် ဆားဘီးယားကို ဘရာဇီးလ် ခက်ခက်ခဲခဲရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိတယ်။ ဆားဘီးယားကို ဘရာဇီးလ် မနိုင်လောက်ဘူး။ သရေကျဖို့များတယ်။
ဆွစ်ဇာလန် နှင့် ကော်စတာရီကာ (၂၈-၆-၂၀၁၈ နံနက် ၁၂း၃၀)
ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်တက်ဖို့ ဆွစ်ဇာလန်အသင်း အခွင့်အရေးကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ သရေလောက်ကစားရုံနဲ့ အုပ်စုက တက်မှာပါ။ ကော်စတာရီကာအသင်းကတော့ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို လက်ပြနှုတ်ဆက်ခဲ့ရပြီ။ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ပဲ ကစားရတော့မယ်။ ဆွစ်ဇာလန်အနိုင်သေချာပါတယ်။
ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့တကျရောကျခှငျ့ကို ဘရာဇီးလျနဲ့ ဂြာမနီ ရယူနိုငျမလား
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားအုပျစု(E)နဲ့ (F)ရဲ့ နောကျဆုံးပှဲစဉျတှကေို ဒီနေ့(ဗုဒ်ဓဟူး)မှာ ဆကျလကျယှဉျပွိုငျကစားကွမှာပါ။ နာမညျကွီးအသငျးတှဖွေဈတဲ့ ဂြာမနီ၊ ဘရာဇီးလျအသငျးတို့ နောကျတဈဆငျ့တကျရောကျခှငျ့ကို ရယူနိုငျမလားဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာကောငျးနတေယျ။ (၄)မှတျရထားတဲ့ ဘရာဇီးလျအသငျးဟာ ဆားဘီးယားနဲ့ ကစားရမှာဖွဈလို့ သတိထားကစားရမှာဖွဈပွီး ဂြာမနီအသငျးကတော့ အာရှက တောငျကိုရီးယားနဲ့ ရငျဆိုငျရမှာဖွဈတာကွောငျ့ နိုငျပှဲရယူဖို့ အခွအေနကေောငျးပါတယျ။ ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့တကျဖို့ မြှျောလငျ့ခကျြရှိနသေေးတဲ့ ဆှီဒငျ၊ ဆှဈဇာလနျအသငျးတို့လညျး အုပျစုနောကျဆုံးပှဲမှာ ရလဒျကောငျးဖို့ ရုနျးကနျကွမှာပါ။
တောငျကိုရီးယား နှငျ့ ဂြာမနီ (၂၇-၆-၂၀၁၈ ည ၈း၃၀)
တောငျကိုရီးယားအသငျးက နှဈပှဲစလုံး ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး အုပျစုက ထှကျခဲ့ရပါပွီ။ ရုနျးကနျနရေတဲ့ ဂြာမနီအသငျးကတော့ ဆှီဒငျကို အနိုငျရခဲ့တာကွောငျ့ နောကျတဈဆငျ့တကျဖို့ အခွအေနကေောငျးတဈခုကို ပိုငျဆိုငျထားတယျ။ တဈဖကျပှဲစဉျဖွဈတဲ့ ဆှီဒငျ-မက်ကဆီကိုပှဲမှာ ဘယျလိုရလဒျထှကျသညျဖွဈစေ တောငျကိုရီးယားကို ဂိုးမြားမြားနဲ့နိုငျမယျဆိုရငျ ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့ကို သခြောပေါကျတကျပါပွီ။ ဂြာမနီပဲ ဂိုးပွတျအနိုငျယူသှားမှာပါ။
မက်ကဆီကို နှငျ့ ဆှီဒငျ (၂၇-၆-၂၀၁၈ ည ၈း၃၀)
(၆)မှတျရထားပမေယျ့ မက်ကဆီကို ဒီပှဲမှာ ပေါ့ဆလို့တော့ မရပါဘူး။ တကယျလို့ ဂြာမနီသာ ဂိုးပွတျနိုငျပွီး မက်ကဆီကိုက ဆှီဒငျကို (၂)ဂိုးပွတျရှုံးမယျဆိုရငျ ဂိုးကှာခွားခကျြအရ ဆှီဒငျ နောကျတဈဆငျ့တကျသှားပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေဲ့ မက်ကဆီကိုရဲ့ခွစှေမျးအရလညျး ဆှီဒငျကို ဂိုးပွတျရှုံးဖို့ဆိုတာ သိပျမဖွဈနိုငျဘူး။ မက်ကဆီကို သရနေဲ့အနိုငျပါပဲ။
ဆားဘီးယား နှငျ့ ဘရာဇီးလျ (၂၈-၆-၂၀၁၈ နံနကျ ၁၂း၃၀)
ဒီပှဲက တကယျ့ကို အကွိတျအနယျရှိလာမယျ့ပှဲပါ။ (၃)မှတျရထားတဲ့ ဆားဘီးယားနဲ့ (၄)မှတျရထားတဲ့ ဘရာဇီးလျတို့အတှကျ အုပျစုကတကျရေး အဆုံးအဖွတျပါပဲ။ ဆားဘီးယားအသငျးဟာ ဆှဈဇာလနျကို မထငျမှတျဘဲ ရှုံးခဲ့တဲ့အတှကျ နဈနာခဲ့တယျ။ ဆားဘီးယားရဲ့ခွစှေမျးနဲ့ ကစားသမားစုဖှဲ့မှုက အားရစရာကောငျးတယျ။ နာမညျကွီးဘရာဇီးလျအသငျးကတော့ ဆှဈဇာလနျ၊ ကျောစတာရီကာတို့နဲ့ကစားခဲ့တဲ့နှဈပှဲစလုံး ရုနျးကနျခဲ့ရပွီး အခုထိ ဘရာဇီးလျအစဈအမှနျကို မတှရေ့သေးဘူးလို့ ဆိုရမယျ။ နောကျတဈဆငျ့တကျဖို့ ဖောငျဖကျြကစားမယျ့ ဆားဘီးယားကို ဘရာဇီးလျ ခကျခကျခဲခဲရငျဆိုငျရဖို့ရှိတယျ။ ဆားဘီးယားကို ဘရာဇီးလျ မနိုငျလောကျဘူး။ သရကေဖြို့မြားတယျ။
ဆှဈဇာလနျ နှငျ့ ကျောစတာရီကာ (၂၈-၆-၂၀၁၈ နံနကျ ၁၂း၃၀)
ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့တကျဖို့ ဆှဈဇာလနျအသငျး အခှငျ့အရေးကောငျးတှပေိုငျဆိုငျထားတယျ။ သရလေောကျကစားရုံနဲ့ အုပျစုက တကျမှာပါ။ ကျောစတာရီကာအသငျးကတော့ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကို လကျပွနှုတျဆကျခဲ့ရပွီ။ ဂုဏျသိက်ခာအတှကျပဲ ကစားရတော့မယျ။ ဆှဈဇာလနျအနိုငျသခြောပါတယျ။
by Ko Kyue . 10 mins ago